Banye rawụta ma chebe Cisco DPC2425 (Definitive) | Site na Linux
Banye rawụta ma chebe Cisco DPC2425 (Definitive)
@Igihe | | Netwọk / Sava
Offọdụ n'ime unu ga-amaworị m Router. Maka ndị na-achọghị, ana m eweta ha:
Ọ na - apụta na obere nwa a na - enwe nsogbu ole na ole mgbe ọ na - abanye peeji nhazi ya. Karịsịa inwe ISP nke m nwere. (Claro - Colombia) Nke ahụ na-egbochi ohere ndị a niile.
Ọ na-eme na a rawụta na ndabara na-eweta a nnọọ mfe na aha njirimara na paswọọdụ. (Hapụ oghere abụọ). Ma na onye ọrụ m ihe ndị a na - eme: Mgbe ị mere diski ike, ọ ga - ahapụ gị ịbanye. Mana naanị n'oge ọ na - emekọrịta na etiti, nnweta ahụ gbanwere ma ruo ugbu a achọtabeghị azịza ya.
Dị ka ọ dị nkịtị ... M raara onwe m nye achọ paswọọdụ ekpe na nri iji nweta m rawụta. (Ọ bụ ezie na m na-ama ike tupu. A femụwe update ahapụwo m enweghị ohere ọzọ, Patching gara aga ohere). Imirikiti nhọrọ enweghị mmetụta. Ruo mgbe m chọtara paswọọdụ na-adọrọ mmasị.
Paswọdu a na-atọ ụtọ n'ihi na ọ bụ ezie na ọ kweghị ka m banye kpamkpam, mperi ahụ dị iche. Dị ka a ga - asị na o nweghi ikikere idezi mana iji nweta.
Paswọọdụ bụ: Uq-4GIt3M (ya na onye ọrụ “admin”)
Njehie mgbe ị na-eji paswọọdụ a bụ:
Njehie a dị ezigbo iche na nke ochie: Aha njirimara na paswọọdụ na-ezighi ezi.
Amalitere m ịnwale ọtụtụ ihe na njedebe m malitere iche: «Kedu ihe ma ọ bụrụ na rawụta amachibidoro ịnweta LAN IP nke dị n'ime ya? (Ihe yiri ihe na - eme UNE routers nke na - enye ohere ịnweta otu LAN IP akọwapụtara)
M wee rụọ ọrụ nke ịnwale ya.
Doro anya.! A OZI! Maka nke a, m gbalịrị TOR, na Web Proxy's Ma ọ na-arụ ọrụ ọ bụla na onye ọ bụla. Nzọụkwụ dị mfe.
Nweta WAN IP gị na proxy. (Iji hụ IP na Linux: curl ifconfig.me ) Ma ọ bụ ị nwekwara ike iji ibe ndị a "ihe bụ ip m" Etc .. Ha tinye ọdụ ụgbọ mmiri 8080
Ihe Nlereanya: 181.51.144.85:8080
Ọ na-ajụ gị maka aha njirimara na paswọọdụ.
Nke a bụ n'aka nnukwu nsogbu nchekwa. Ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike ịnweta a rawụta nke ndị a remotely na-eme ihe ha chọrọ. N'AGBANWU
Onye ọ bụla ga-eche na ihe kachasị mma ga-abụ ịgbanwe paswọọdụ. EE. Ọfọn, m gbalịrị na ọ na-ekwu na ọ gbanweela "na-eju afọ." Ma ọ naghị eme ihe ọ bụla
Yabụ ka anyị gbochie ụzọ dịpụrụ adịpụ.
Ka anyị lee ebe o kwuru, sị:
Anyị na-enye gị ebe ọ na-ekwu Nhọrọ
Anyị deactivate nhọrọ nke: Njikwa nhazi mpaghara
Anyị na-etinye akwụkwọ ma mee. !!!!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Banye rawụta ma chebe Cisco DPC2425 (Definitive)
Ihe 66 kwuru, hapụ nke gị
Compadre, tupu ibipụta isiokwu m na - adụ gị ọdụ ka ịlele nsụpe gị, edeghị ya, ọ dị njọ, ma na-atọ ụtọ nchọta gị, mana ọ masịrị m iji Router nke m jiri ngwa ngwa gbanwere, ma OpenWRT ma ọ bụ DD-WRT .
Router ọ na-ekwu maka ya bụ nke onye na-eweta ịntanetị nyere. A naghị edochi ya maka nke azụrụ n'èzí. Ma ọ bụrụ na ọ dabara nke ọma na ị jikwaa itinye ngwa ngwa gbanwere n'ime ya, ị na-anọghị n'ịntanetị na Claro Colombia nwere ike ịgba gị ụgwọ maka nke ọhụrụ
Kpọmkwem nke ahụ nwere ike ime, nke bụ eziokwu bụ na amaghị m banyere nke ahụ, mana n'ọnọdụ ọ bụla ị ka nwere ike ịzụta otu n'ime ndị na-agagharị agagharị na ụlọ ahịa ahụ ma tinye ya na otu ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwaọrụ a na-ajụ ma jụọ ISP ka tụfuo ya ọrụ WiFi n'ihi na ịchọghị ya na mfe, Echere m na ihe kachasị mma bụ mgbe igbubi ọnwụ gị, nri?
M na-eji m TP-Link rawụta na Wi-Fi, ebe ọ bụ na rawụta dị na 2nd. ala na PC m nọ na 1st, yabụ ana m eji ama m dịka antenna Wi-Fi.
Ya mere, aga m echekwa maka eriri Wi-Fi USB m ka m wee ghara ịmanye ekwentị m wee si otú a ghara imebi ya nke ukwuu.
Super, lee ISP m na-eme ụfọdụ bullshit nke na-egbochi WiFi maka oge, na ọ bụ ya mere m ji lara ezumike nká m Cisco-Linksys na DD-WRT ma zụta TP-Link ma o doro anya na m na-etinye otu ngwa ngwa ahụ ma enwere m Otu nsogbu, Cisco bụzi onye nyocha maka TV na ime ụlọ, ọ na-adịkwa mma.
Ha anaghị agbanyụ ya. Alụwo m ndị ahụ ọgụ nke ukwuu. Ihe m mere bụ na ha tinyere ya na WPA2 (ha na-abata na WEP na ndabara) ma etinye m ezigbo igodo iji hapụ. Ọzọ m wepụrụ antenna site na rawụta. Ee ee, enwere m rawụta nke m n'etiti, mana ọ na-agba ara na ha nyere gị ihe maka ihe ị na-akwụ ma ghara ikwe ka ị chịkwaa ya.
Ọfọn jho / & / & %% & ihe ihere na a na-enye ụdị ọrụ ahụ na mba ndị ọzọ, ọbụnadị njọ nke ojiji nke WEP, echekwara m na ha na-eme nke ahụ maka ndị freaks na-eji Mac hahahaha na nke ahụ bụ ihe na-amaghị etu hazi rawụta nke ọma, ihe ihere.
Easy: Ọ bụrụ na gị rawụta nwere MAC address nzacha, tinye Mac adreesị nke PC gị na ihe ọ bụla ọzọ Wi-Fi ngwaọrụ, na jikọtara na gị WPA2 isi, na otú i n'ezie nwetara gị Wi-Fi rawụta na-enweghị wepụ Wi-Fi poolu. Fi. Ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ Wi-Fi, ị ga-ewepu antenna ma nọgide na-eji rawụta gị enweghị Wi-Fi.
Ọ bụrụ na ị gbakwunye nzacha adreesị MAC, ị ga-abanye n'ụzọ nke ndị ahụ na-achọ iji Beini ma ọ bụ BackTrack izuru mgbaàmà Wi-Fi nke ndị ọzọ.
Nke ka mma, gbanye njirimara njirimara anwansị na Iceweasel Aurora gị.
Eziokwu bụ na ndị ama ama Cisco routers na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, ọkachasị n'ihe gbasara ngwaike / ngwanrọ n'ihe metụtara ọnụahịa. M na-arapara na TP-Links nke m chere bụ nke kachasị mma na ogo / ọnụahịa, nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-ebu Linux ma nwee ike gbanwee ya na ụlọ ọrụ Linux ndị ọzọ dịka OpenWRT na DD-WRT.
Nke ahụ dị mma, m na-eji TP-Link WR740N na OpenWRT ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị "nsogbu" m nwere emeela ka ọnụọgụ nke njikọ njikọ na-arịwanye elu, ebe router ragidere ma chọọ ịmalitegharị. E wezụga nke ahụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, enwekwara m ya ihe dị ka afọ 2.
Onye ntanetị ahụ bụ nke onye ikwu m, ma buru n'uche na ịbụ obere njedebe nke TP-Link, ọ na-atụgharị ọtụtụ ndị ọzọ na-esite na etiti / elu-njedebe ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ọzọ, na mgbakwunye inwe ezigbo Wi-Fi mkpuchi, menu weebụ nwere ọtụtụ nhọrọ na ịnweta ọdụ Linux site na telnet. N'okwu m, enwere m TP-Link W8970 na eziokwu bụ na enweghị m nsogbu ọ bụla, ebe m na-agaghị agbanyụ ya ma ọ bụ bidogharịa ya, ọ na-agba ọsọ ma na-arụ ọrụ zuru oke.
Ee, ọ dị ọnụ ala karịa Cisco / Linksys ọ bụla yana arụmọrụ ha yiri nke a. Izu ole na ole gara aga, ekpebiri m ịwụnye femụwe OpenWRT na ya maka ule ma ọ gbanwere ịrụ ọrụ nke ọma.
Mana na nke a ị gaghị egbochi igbochi, ebe ọ bụ na site na lan ip ị nwere ike ọ bụghị?
Zaghachi José Torres
nnọọ nkọ hehehe
Ekele @Jlcmux. Enwere m Ubee (ya na Claro / co) ma enwere m otu nsogbu ahụ. Ọ na-ewe iwe na ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka pọd, ha nwere ndị na-enyocha njikọ gị. Maka ịhapụ, ị ga-ama paswọọdụ maka ụdị m iji hụ ma m nwalere azịza gị? Daalụ n'ọdịnihu.
Enweghị echiche. Gbalịa otu usoro iji hụ otu.
Enwekwara m Ubee (Cablecom-México) na aha njirimara: admin na paswọọdụ: cableroot
You ga-enwe nhazi niile n'aka gị, n'ezie, ọ bụrụ na Ubee gị bụ modem USB.
Zaghachi Victor Z
Spam. Onye ọ bụla nwere ma ọ bụ jikwaa ezigbo blog maara na e nwere bots na-ahapụ ihe na url iji dobe saịtị ma ọ bụ gbasaa malware. anya na nke ahụ.
Ọ bụ ya mere eji eji ngwaọrụ dịka Mollom si Acquia (akụkụ azụmahịa nke Drupal), na Akismet (site na Auttomatic).
ọ naghị arụ ọrụ m: / mgbe m nwara site na tor ma ọ bụ site na onye nnọchiteanya weebụ ọ naghị emepe ya naanị meghere m na ip dị n'ime chromium mana ọ bụghị n'ụzọ ọzọ. M na-eme ihe ojoo?
Obere ihe m masịrị Cisco na ọchịchọ ya maka ịchị ụwa. CCNA na Security Security, Ama m ihe m na ekwu.
Ọnụ Granda dijo
Eji m cisco a lụọ ọgụ nke ukwuu ruo mgbe m chọtara isi: "g3sti0nr3m0t4"
ma nke a dị UNE ...
Zaghachi na-efu Granda
You mere usoro isiokwu a kọwara iji nwee ike?
Kedu otu ị si mee ya? Enwere m Cisco na Une, mana enweghị m ike ịbanye
Cpe04Epm nke ahu bu igodo nke UNE
Zaghachi ka sddqd rqwwerew
Naanị ihe ị na-achọ
Ndewo. Ezigbo ezigbo echiche, mana echere m na ọ mechiri ụzọ dịpụrụ adịpụ site na ụfọdụ IP, n'ihi na yana onye nnọchiteanya weebụ ọ nweghị ike ijikọ yana egbochiri nkịta 8080. Echiche ọ bụla nke ip modem na-enye ohere ịnata
Zaghachi Luis F
Ndewo Luis F, enwere m otu nsogbu ahụ na Web Proxy, o doro anya na ọnọdụ ahụ na-achọpụta na ọ ka dị n'ime netwọkụ ahụ, m gbalịrị site na netwọkụ dị anya site na ekenye IP siri ike ma rụọ ọrụ dị ka ekwuru n'isiokwu ahụ.
Enwere m otu nsogbu ahụ. Enweghị ụlọ ndị ọzọ, ma ọ bụ site na njikọ 3G, ma ọ bụ site na obodo ndị ọzọ nwere ndị ọrụ ndị ọzọ enweghị m ike ịbanye. Insurance ka amachibidoro IPs ha dịpụrụ adịpụ
Enwere m ike ịbanye nhazi modem ma emesia ọ gaghị ekwe ka m tinye akwụkwọ nnọchi anya ọ bụla, gịnị kpatara ya?
Agbalịrị m iji tor mana ọnweghị jikọọ m na ip ọha m site na ọdụ ụgbọ mmiri 8080.
Kedu ihe ọ ga-abụ?
Ọ dị mma mgbe niile ịnwale nrụpụta ụlọ ọrụ
ezigbo mma ma aghọtaghị m akụkụ nke ip ma ọ bụ na-agbakwunye 8080 plz Achọrọ m ịgbanwe okwuntughe nke wifi m n'ihi na ndị agbata obi m zuru ya, nyere m aka !!!
ndo ma enwere m obere ntughari na ikpe nke ịntanetị
ma jiri aha njirimara na paswọọdụ dozie nsogbu ndị ahụ
mana amaghim esi gbanwee ip ma obu tinye 8080
Ekele m gị ma ọ bụrụ na ị zaa
Compadre, ị bụ ọgụgụ isi, m nwere ike mechaa laghachi messing na nkewa ọdụ ụgbọ mmiri ... 🙂
Nke a bụ nke mbụ na-eduzi naanị na ọrụ, ARE bụ onye nkuzi, na-ekele unu nke ukwuu n'ihi na nke a nnukwu onyinye SISO modem bụ nnọọ Nsogbu IJI nweta ha, na-ekele gị, na-eme, na-enweta !!! ! !!!!!!!!!!!!!
Kedu ka esi banye n'akwụkwọ nnọchiteanya, nyere m aka, biko?
Enweghi m ike ịbanye na peeji karịa otu oge, ọ dị onye maara ihe kpatara ya?
N'abalị a, m na-agbalị ịhụ ma ọ na-arụ ọrụ m na m Cisco modem. Ekwesịrị m ịhazi igwefoto IP na site na ihe m gụrụ na m ga-ịkpọghee ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri.
Achọtara m na nnọkọ, ozi ndị na-esonụ iji hụ nke na-arụ ọrụ maka m:
Maka Claro Colombia ha nwere ike ịnagide 192.168.0.1 dị ka 192.168.100.1 na onye ọrụ ha debere n'ụlọ na paswọọdụ ma ọ bụ paswọọdụ Uq-4GIt3M. na njikere
Zaghachi ka ọgaranya67801
Apụghị m na mbido, ọ dịghị pc kwere ohere elu ntọala, ma strangely ọ na-arụ ọrụ m si m android, na iji dolphin Nchọgharị nchọgharị naanị na adreesị nke rawụta. (Claro Colombia)
Olileanya ọ ga-ejere gị ozi.
You ma usoro aga - eji nweta modem ndị a ma sitere n'aka UNE?
Ma ọ bụ ọ bụrụ na m eme nrụpụta siri ike, ihe ọ ga - eme nhazi nke akara ekwentị (nke a jikwaa na nke a)
Aghọtaghị m akwụkwọ nnọchiteanya ahụ, achọgharịrị m maka proxies wee nweta ... ebe m tinyere ọnụ ụzọ mbata m na nke m bụ 10.5.0.1, mgbe ahụ ọ naghị enye m ... Mgbe ahụ, m gbalịrị itinye 10.5.0.1:8080 ma ọ nyeghị m, ọ bụrụ na ọ rụụrụ m paswọọdụ na aha njirimara mana m ka enweghị ohere ọrụ ọrụ "ntọala"
Biko zaa m… M ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na m jikwaa dezie ntọala ahụ maka ihe nkesa my minecraft 😀
Naanị iji dokwuo anya ... My rawụta ma ọ bụ mọdem (ihe ọ bụla a na-akpọ ha) xD doro anya ...
You nwere ike inyere m aka ịbanye Mọdem nke UNE Model Cisco DPC2425 Biko?
A na-ekele! dijo
Daalụ. Ọ rụrụ ọrụ maka Cisco DPC2425R2C si VTR (Chile).
Zaghachi A Ekele!
isi modem doro anya 2014 na 2015
Onye ọrụ: home
Daalụ, emesịrị m nwee ike ịbanye ugbu a iji gbanyụọ wifi 😀
I nweghi ike ọzọ, ha kpọchiri ọdụ ụgbọ mmiri ahụ
Ndewo, olee otu unu si arụ ọrụ, enwere m Cisco DPC2425 modem n'ezie, tupu m nwee onye na-ahụ maka Movistar (OBSERVE), n'ihi ya, ekpebiri m itinye ya dị ka onye na-emegharị ihe ngosi Wi-Fi, hazie ihe niile, ọnụ ụzọ ámá gbanwere, dhcp nwere nkwarụ, ihe dị ịtụnanya bụ N'oge ijikọ onye nyocha na Cisco, nke ikpeazụ ahụ malitere ịmalitegharịa ma ọ bụ naanị netwọk ikuku ka ahaziri.
Gbanyụọ ohere dịpụrụ adịpụ? M gbochiri onwe m, dimkpa amara i mere obere enyi
Zaghachi Esteban Bermudez
Ihe ngwọta ọ bụla? Otu ihe ahụ mere m, nrụpụta ahụ erughị ya
ọrịa vasquez dijo
Ndewo, amaghị m ibe m ga-abanye iji hazie rawụta m, biko gwa m! Achọrọ m ịnwale ịgbanwe okwuntughe m. M tinye cisco.com, enwetara m peeji ọzọ ọ bụghị dịka nke dị n'elu iji gbanwee nhazi mana dịka nleta na ibe gị. Obi ga-adị m ụtọ ma ọ bụrụ na ị za m ugbu a
Zaghachi to angela vasquez
Enwere m nsogbu Enwere m Cisco WiFi rawụta, amaghị m otu esi agbanwe paswọọdụ
M nwere a serial WiFi rawụta 10820c65243904 Cisco ika m ike ịgbanwe okwuntughe bụghị otú e si abanye m si costarica pogon adreesị anaghị apụta google search ịgbanwe paswọọdụ adreesị na m tinyere 192.168.3.1
Ndewo, onye nwere ike inyere m aka ịhazigharị rawụta cisco - dpc2425 nke ekwuru na ibe a. ọma ihe m chọrọ ime bụ hazi a rawụta na repeater mode ma site WIFI si ọzọ rawụta. Daalụ
Enweghị okwuntughe ọ bụla arụghịrị m ọrụ. N'oge gara aga, m na-abanye dị ka onye ọrụ nchịkwa na paswọọdụ na-enweghị isi, mana ugbu a enweghị m ike ịbanye na rawụta m si Peru.
Ọ nwere ike hazi telephony kwa maka modem a?
Enwere m modem Cisco DPC2425 na ọdụ ụgbọ analog jikọtara na mgbanwe ekwentị. Nsogbu a na - aputa ihe maka na modem amaghi nkpu a na - ebipu ya (onhook) ma kpokuo ya ka na - aru ​​oru.
Zaghachi Vica P
Enwere m modem cisco dpc 2425. Achọrọ m ịma, ọ bụrụ na m gbanwee site na Megas 20 ruo 30, otu Modem ahụ ọ ga-arụrụ m ọrụ. ??
Ọ bụrụ na ọ bụghị, olee nke kachasị mma?
Zaghachi Pedro E.
Accesszọ ọkọlọtọ: 192.168.0.1
Onye ọrụ: admin
Omenala nnweta: 192.168.1.1
Ọ rụghị ọrụ m: L ga - abụ nsogbu ọdụ ụgbọ mmiri, m na - anwa ịgbanwe okwuntughe Wi-Fi m
Ọ na-enye m ohere ịbanye ma mgbe m na-enyere NAT ma ọ bụ DMZ aka, enweghị m ike ịnweta akụrụngwa m chọrọ, amaghị m ma ọ bụrụ na ịkwụsị ọrụ ọ bụla na nhọrọ na-enye m ohere ịbanye ebe dị anya na-enweghị akwụ ụgwọ ip ọha. Onwere onye ma ka esi eme ya?
Zaghachi ka rvelam
hahahaha ọgụgụ isi ọ rụrụ m ọrụ na oge mbụ na Uq-4GIt3M: V: V
Anyị ga-emelite na WordPress 3.6 n'oge na-adịghị anya
Etu esi wụnye ụdị Choqok kachasị ọhụrụ (chịkọtara) na Debian, Ubuntu ma ọ bụ nkwekọrịta